Path neiyo Inodya Dhiragoni, inonakidza yekudyidzana nyaya kune vadiki vari mumba | IPhone nhau
Path uye Dhiraidhi Kudya, inonakidza yekudyidzana nyaya kune vadiki vari mumba
Kana vana vadiki mumba vangoenda kuchikoro kwevhiki, vazhinji vedu vabereki vasingachazivi zvekuvatandadza nazvo. Kunyangwe paIpad isu tichigona kuwana yakawanda mitambo nemashandisirwo kuitira kuti pavanenge vachinakidzwa nekudzidza, dzimwe nguva vanoda kutarisirwa kwedu kuti tivabatsire kana kungova nesu kuitira kuti tikwanise kuona zvavanoita uye dzimwe nguva kusangana navo. Path neDyoka Dhiragoni ndeimwe yeaya maficha atinogona kugovana nevana vedu vadiki, sezvo iri nyaya yekudyidzana iyo vana vedu vachakwanisa dzidza kukosha kwezvakasiyana uye zvine hutano kudya.
Path neiyo Inodya Dhiragoni, mukuwedzera pakudzidzisa kukosha kwechikafu chine hutano, zvinobatsira vana vadiki kuisa fungidziro yavo nehunyanzvi mukufambisa pavanonakidzwa nenyaya iyi yekudyidzana, yakagadzirirwa vana kusvika kumakore mashanu uye inowanikwa kurodha pasi. mahara uye pasina kushambadzira kana kutenga-mu-app, chimwe chinhu chakanyanya kuoma kuwana mazuva ano. Iko kunyorera kunowanikwa muChirungu, Spanish (kubva kuSpain), French, German, Italian uye Catalan, kusanganisira ese manzwi uye zvinyorwa.
Hunhu hweSenda uye iyo Inodya Dhiragoni
Anoshamisa maficha uye mifananidzo, izere nezvinhu zvinofambidzana.
Zvese zvinyorwa uye manzwi akaongororwa nekuda kwezvinangwa zvekudzidzisa, saka kuverenga chikamu chechiitiko uye chinonakidza.
Yakadzokororwa uye yakawiriraniswa zvinyorwa nemanzwi, kubatsira avo vanotanga kuverenga.
Kupindirana kwekuteedzana kwemwana kuti apindire akananga mune iyo nyaya. Mumwe munhu anofanira kufudza iyo Inodya Dhiragoni, ngaave mukomana wako!
Kudyidzana kuri nyore, nemifananidzo, kurira, mhedzisiro uye zvimwe zvinhu zvinogadzira chiitiko chinonakidza chose, pamusoro pekubatsira kubatana kwemwana-ziso.
Hombe mifananidzo. Nenzira iyi pane zvinhu zvinogara zvichiitika.
Huwandu hwemheremhere. Mwana anozoziva ruzha rwezvinhu zvese paanozvibata.
Path uye Eater Dragon inotsigira mitauro yakati wandei, zvese muzvinyorwa uye nemanzwi nevatauri. Iyo ndiyo nzira yakanakisa yekuzivisa vana kudzidza mitauro mitsva, kuburikidza nekunakidzwa.
Nziyo dzakasiyana dzinonakidza, dzakashandurwa kune imwe nhambo yenhoroondo, iyo inobatsira kunyudza mukati mayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Path uye Dhiraidhi Kudya, inonakidza yekudyidzana nyaya kune vadiki vari mumba